အဘယ်ကြောင့်ကိုယ်တော်၏ Wi-Fi ယူတာပဲနှင့်၎င်းသည် Fix စေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင့်ရဲ့ Wi-Fi ယူတာပဲနှင့်၎င်းသည် Fix ရန်ကဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်
အဘယ်ကြောင့် Wi-Fi ယူတာပဲ
channels နှင့် frequency
နီးပါး wifi ယူတာပဲ အိမ်မှာကွန်ရက်များမှာ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အယူသီးမှုထက်အနည်းငယ်မျှသာပိုအလငျး၌အိမ်မှာ Wi-Fi ၏ဆင်းရဲသောသူကိုကွပ်မျက်နှင့်နောက်ဆက်တွဲသဘောထားကွဲလွဲ, ဖရိုဖရဲနှင့်ပြည်တွင်းဖြစ်ပြုပြင်မှုများကြံ့ကြံ့ခံပါတယ်။ နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြလိမ့်မည်ကို - အမှု၌သင်တို့ကိုသူတို့ switch ကိုဧည့်ခံ apparatuses ရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ပင်ဖျက်ဆီးအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ချုံအပေါင်းအဘော်မိသားစုနှင့်အပေါင်းအသင်းမှထုတ်ဖော်ရန်တစ်ခုချဉ်းကပ်ရှာဖွေနေ, တစ်ဦးပြင်ဆင်ထားအိုင်တီမာစတာင်?
သငျသညျအိုင်တီမှကျွမ်းတဝင်မရှိသောသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်ပြီး Wi-Fi စနစ်က streamlining ခိုင်မာတဲ့အတွေ့အကြုံအရတစ်ဦးချဉ်းကပ်ရှာဖွေနေ, ဒီ post ကိုသင်အသုံးချလိမ့်မယ်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များအတွက်အလေ့အကျင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ်သင့်အိမ်များကိုအသုံးပြုရန် Wi-Fi စည်းရုံးရေးနှင့်တစ်ဦးကို manual ထဲမှာအထောက်အကူဖြစ်စေအခြေခံဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးအိုင်တီပါရမီအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီနေ့ဖြစ်၏။
၎င်း၏အလွန်သဘာဝအားဖြင့် Wi-Fi ယိမ်းယိုင်အရည်အသွေးနှင့် signal ကိုခှနျအားဗလနှင့် ပတ်သက်. ကြိုးထက်ပိုဆိုးသည်။ ဝါယာကြိုးနဲ့တူနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလတ်စားကူးကြောင်းအချက်ပြတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လမ်းရှိသည်။ ကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုများကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့စွက်နိုင်ပြီးသူတို့ဂီယာ၏ရငျးမွစျထံမှရပိုမိုဝေးလံသောသူတို့၏အစွမ်းသတ္တိကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ Wi-Fi မှီခိုနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးချွတ်ဖြစ်ပါသည်, သေးပါကတဦးတည်းကိုကြီးစွာသောများစွာသောလူစေရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်င် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Home-အသုံးချ gadgets ၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးတခုတခုအပေါ်မှာ Ethernet အသင်းအဖွဲ့များအတွက်ရာမရှိပေါ့။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပကတိအီအတွက်ရှိသတဲ့ကြောင်းနယ်ပယ်တစ်ခု variable ကိုစောင်ဘို့ငါတို့ datastream ၏ခွန်အားယဇျပူဇျော။ လူအားလုံးတို့သည်ပိုကောင်းကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသညျ ပို. ပင်သင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုနေအိမ်ဖုံးသောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုအထူအစိုင်အခဲအခိုးအငွေ့ကအောင်, အစောင်ထဲမှာတွင်းဖြည့်သည်။
switches ကို web traffic ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ။ သငျသညျ switches များနဲ့ switches နှင့်အတူ Keith ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကြောင်းပိုမိုအတွက်ယူနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ISP များမှပစ္စည်းများကိုငှါးရမ်းပေးသည် switches တွေသာမန် 2-In-1 gadgets ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးအသွားအလာကြီးကြပ်နှင့်သင့်ကြိုးမဲ့အသင်းအဖွဲ့ဘောင်သောရေဒီယိုအချက်ပြလှိုင်းထုတ်လွှင့်။ သင့် switch ကိုအပေါ် recieving ဝါယာကြိုးအဘို့ဖြစ်ကြပြီးသင်ကသင့်အိမ်ရှိပိုငျးအခွားကို၎င်းငျးအစက်အပြောက်မှာသူတို့ကိုထောက်ပြနူးညွတ်စေခြင်းငှါ, သေးကြိုးမဲ့အချက်ပြမှုများ spellbound ဖြစ်နှင့် 90 ဒီဂရီအနားမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ရည်ရွယ်သောအရာဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်သူတို့ကလုံးဝမဖြစ်စေဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်, အလားတူသင်တန်းအတွက်ထောက်ပြကြသည်အာမခံပါသည်။
ဧည့်ခံယန္တရားအနေအထားအတိုင်းအတာကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါနေစဉ်, ဒါကြောင့်နေဆဲဖွယ်ရှိသည်သင်၏မြေတပြင်လုံးအိမ်သူအိမ်သားကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအ 2-In-1 switches များနှစ်ဆအပေါ်နှစ်ခုအလုပ်အကိုင်လုပ်နေတာ, သူတို့ပဲတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ကတည်းကသူတို့ပုံမှန်အားဖြင့် Wi-Fi Access ကိုအမှတ် (WAP) လို့ခေါ်တဲ့ကျိန် ဆို. ပူဇော် gadgets ထက်လျော့နည်းအောင်မြင်သောဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးက combo switch သည်နှင့် Wi-Fi လွှင့် gadget ကမှန်မှန်တစ်ခုလုံးအိမ်သို့နယ်ပယ်ပေးရအလွန်အကျွံနှင့်တိုက်ပွဲများလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ယင်းအစားအလားတူရောင်းချသူထံမှ WAPs တစ်ဗူးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့စကားပွောနှင့်ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိသင့်အိမ်များအတွက်အတိုင်းအတာအသားတင်ကိုငါပေးမည်။
ဒေါင်လိုက်, ယေဘုယျအားဖြင့်အလျားလိုက်မဟုတ်ကြောင်း, ဤ gadgets ဆဲအသီးအနှံ signal ကိုသတိရပါ။ သငျသညျ multi-ပုံပြင်အိမ်သူအိမ်သားရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်သင်သည်တစ်ခုချင်းစီကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတဦးတည်း WAP ထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Wi-Fi-အာဏာအပ်နှင်းခြင်းနှင့် Wi-Fi ထုတ်လုပ် gadgets သူတို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အလားတူစံအသုံးချဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်: အ gadgets ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများကိုကျော် crosswise သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးသော 802.11 စံ။
အဆိုပါ 802.11 စံအတွင်းမှာပဲ gadgets ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကိုသုံးနိုင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ထားမဟုတ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အပျေါဆကျသှယျဖို့အဆန်းသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူနှောငျ့ယှကျစရာမလိုပေနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်သောလိုင်စင်မဲ့များမှာအားလုံးသော, ရှိပါတယ်။ သူတို့ကရေတိုအကွာအဝေးစာပေးစာယူများအတွက်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်အချက်ပြတိုက်ပွဲများပေါ်ပေါက်ကြပါဘူးဒါကြောင့်သိသာထင်ရှားသောများမှာ - သင်သည်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းနံနက် DJ သမားတစ်ဦးထံမှချွတ်စွပ်အရွယ်အစားထပ်မဖြစ်အောင်မှာဆက်သွယ်ပြောဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် channel များကိုများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကိုအနီးအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်က channel များကိုဖုံးအုပ်ပေါ်ဖြစ်မည်ဟု, အိမ်နီးချင်းအိမ်များကနေ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အလားတူနေအိမ်အတွင်းပစ္စည်းတွေကနေ Wi-Fi လွှင့်မှုအတွက်အလွန်ပုံမှန်ပါပဲ။
သငျသညျ 5GHz သို့မဟုတ် 2.4 GHz အမြန်နှုန်းအဘို့သင့် gadgets setting များအကြားကောက်လို့ရပါတယ်။ အကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး 2.4 သည်နှင့်ပေါင်းဘော်နှင့်မလုံလောက်ဝေးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေဖြစ်ကြကြောင်းကိုအကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ channel များကို 1,6နှင့် 11 ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအရှိဆုံးပုံမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်သည်ထိုသူတို့ကောက်သောဖြစ်ရပ်အတွက်သင်သင်၏အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ဖုံးအုပ်မရင့်ကိုသေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သို့သျောလညျးသငျသညျအလားတူ channel မှာ WAPs သို့မဟုတ် switches များရှိသည်သောဖြစ်ရပ်အတွက်မသက်ဆိုင်ကြောင့်အထက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုံးခုထဲကတစ်ခုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ၏, သူတို့ရောက်စွက်ဖက်နှင့်သင့် Wi-Fi ပိုမိုဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့်အချက်ပြမှုတိုအကွာအဝေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းကြောင့်တကယ်ဖြစ်နိုင်အဲဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုင်းများရှိလိမ့်မည်သောမြေပေါ်တွင်အကျိုးအမြတ်တခုဆိုတဲ့အချက်ကို၏အလငျး၌ 5GHz ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
Get Cisco Training & Certifications
ဘယ်လိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Build သလော